မင်းအနားက ငါပုန်းရှောင်နေရတဲ့ အကြိမ်ပေါင်းလဲများလှပါပြီ….
မကြေငြာပေမယ့် ဝေဒနာကအထင်းသားမို့ မင်းမြင်နေရမှာပါ …..
မင်းနုတ်ဖျားက ငါ့ကို သိပ်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းရဲ့နောက်မှာ
သေဒဏ်ဆိုတဲ့ အမိန့်တစ်ခု ထပ်ချပ်မကွာပါလာခဲ့ရင်လဲ
Posted by ywartharlay at 1:33 PM0comments
Posted by ywartharlay at 6:47 AM0comments
Posted by ywartharlay at 7:44 AM0comments
Posted by ywartharlay at 7:42 PM0comments
Posted by ywartharlay at 7:39 PM0comments
Posted by ywartharlay at 7:37 PM0comments
ချစ်ခဲ့သမျှတွေအတွက် လွမ်းတာကို နာတာနဲ့ဖြေတတ်ရမယ်လို့ လူတွေကပြောကြလဲ ငါကိုယ်တိုင်မင်းအပေါ် မွေးမြူလို့မရတဲ့ အမုန်း။နာကျည်းမှုတွေကို ဘယ်မှာလိုက်ရှာတွေ့ဦးမှာလဲ… တကယ်ဆို အချစ်ဆိုတာကို ပေါ့ပေါ့တွေးတတ်တဲ့ ငါလိုလူကို ချစ်တတ်အောင် မင်းသင်သွားတယ်…. အလွမ်းဆိုတာကို ဟာသလို့ထင်ခဲ့တဲ့ငါ မင်းမသိလဲလွမ်းတတ်နေမိတယ်… လိပ်ပြာတစ်ကောင်ပျံသန်းခဲ့ရာ ပန်းမရှိတဲ့ကမ္ဘာ လွမ်းသမျှခြေရာထပ်ခဲ့ပေမယ့် မင်းငါ့အတွက်တစက်ကလေးလွမ်းမိလားချစ်သူ….. ဆန္ဒတွေမြေမြုပ် ငါလိပ်ပြာကို ၀ိညာဉ်ထုတ်ပီး မင်းအတွက် စက်ရုပ်လူသား ငါ့ကို သတိရရင် ….. အလွမ်းဖြေဆေးပေးသနားပါချစ်သူ
Posted by ywartharlay at 7:27 PM0comments
မတွေးပဲမင်းအကြောင်း ခေါင်းထဲမှာအမြဲရှိနေတယ် မခေါ်ပဲမင်းအနား အမြဲရောက်နေတတ်တယ် မလိုရည်ရွယ်ပဲမင်းအကြောင်း ကဗျာတွေရေးမိနေဆဲပါ ငါလေ မခိုင်းပဲလုပ်တတ်တာဆို မင်းကိုလွမ်းတာနဲ့ မင်းကိုချစ်နေတာ မင်းနဲ့ပါတ်သတ်တာတွေပါပဲ ငါလေဖြစ်နိုင်ရင် *တခါတခါ မလိုအပ်ပဲ အသက်တောင်မရှူချင်ဘူး အသက်ရှူရမယ့်အချိန်ကို သတိရပြီး မင်းကို မေ့သွားမှာ စိုးရိမ်မိလို့*
တခါတခါလဲ ချစ်ခဲ့သမျှကို ပေါ့ပေါ့လေးတွေး ခလေးလေးလို ရယ်နေချင်သေးတယ် မင်းကိုချစ်ခဲ့တာတွေမေ့ တမြေ့မြေ့နာကျည်းတတ်ချင်တယ်မင်းအတွက် ခံစားရတဲ့ ခံစားမှုတွေကို ချောင်းတခုမှာမျှော ငါ့ဘ၀ကို ငါ့သဘောနဲ့ လှော်ခတ်ချင်ပေမယ့်….. မင်းကိုချစ်မိခဲ့တာတွေက အရှိန်ပြင်းစွာပူလောင်ခဲ့ပီး ခလုတ်တစ်ချက်ပိတ်ရုံနဲ့ တဖြည်းဖြည်းအေးစက်သွားတတ်တဲ့ မီးဖိုတစ်ခုလိုမှမဟုတ်ပဲ ငါဟာ မင်းကို ချစ်တဲ့အချစ်တွေအတွက် ထာဝရတောက်လောင်နေဦးမယ့် နေမင်းကြီးပါ….
Posted by ywartharlay at 7:32 AM0comments
နှလုံးသားတံခါး မဖွင့်ပဲ ထိုးဖောက်ပွင့်အန်ကျလာတဲ့ ငါ့အချစ်တွေ အလွမ်းတွေအတွက် ဒီကဗျာတွေဖန်ဆင်းပြီး ငါ့ရင်ခွင်အတွင်း မင်းရှင်းလင်းစွာ မြင်စေချင်တာပါ . တကယ်လို့များ ငါ့စကားလုံးတိုင်းမှာ ငါ့နှလုံးသည်းပွတ်ကနေ သွေးတစ်စက်စီးဆင်းသွားမယ်ဆို မင်းရှေ့မှာသွေးချောင်းစီးနေလောက်ပီချစ်သူ …မင်းသိထားဖို့က စကားလုံးတွေ ကဗျာတွေမှာအသက်မရှိပေမယ့် ငါ့အလွမ်း ငါ့အချစ်တွေကတော့ နတ်ဆေးပင်တွေ တန်ခိုးထက်သာလွန်တဲ့ စွမ်းအားနဲ့ ရှင်သန်နေတာပါ…..မင်းကသာ အလွမ်းတစ်စက် အနမ်းတစ်ချက်အတွက် ပန်းတခက်လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင် ပန်းဥယျာဉ်အလယ်မှာ ငါဆိုတဲ့လိပ်ပြာပျော်ရွှင်စွာ ပျံသန်းနေမှာပါ
Posted by ywartharlay at 6:43 AM0comments